Manhole ( 2014 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel October 23, 2016
ဒီတခေါက်တင်ဆက်မယ့် ဇာတ်လမ်းကတော့ horror အမျိုးအစားပါ ... အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေ ငြီးငွေ့နေသူတွေအတွက်တော့ ဂွတ်ရှယ် ပေါ့ ...
ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ အဓိမင်းသမီးအနေနဲ့ Mirror of the Witch ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက မင်းသမီးလေး Kim Sae-ron နဲ့ အခုလက်ရှိ ဂယက်ထ နာမည်ကြီးနေတဲ့ '' Tain to Busan '' နဲ့ '' Silenced '' စတဲ့ ဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Jung Yu-mi တို့ က ညီအစ်မနှစ်ယောက် အသွင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ...
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ - ဆိုဂျောင်း ( Kim Sae-ron ) နဲ့ ယွန်းဆို ( Jung Yu-mi) တို့ဟာရုတ်တရက်မမျှော်လင့်ထားတဲ့ကြောက်ရွံဖွယ်ရာဖြစ်ရက်ဆိုးကြီးတစ်ခုကိုကြုံတွေ့ရပါတယ် ... အဲသတင်းဆိုးကတော့ CCTV လူသတ်သမားဆိုချူး(ဂျန်ကောင်းဟို)ဟာ CCTV ကင်မရာတွေရဲ့အကူအညီနဲ့စိတ္တဇဆန်ဆန်လူပေါင်းများစွာကို ... manholeလို့ခေါ်တဲ့ရေဆင်းမြောင်းပေါက်ကြီးထဲမှာသက်ဖြတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ် ... ဇာတ်လမ်းအစမှာတော့စိတ္တဇလူသတ်သမားဆိုချူး ( Jung Kyung-ho ) ဟာ ဆောင်းရီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ် ...ထူးခြားတာကအဲ့အပေါက်ကြီးကနေ့ရောညရောမှောင်နေတာပါတဲ့ ... ဇာတ်လမ်းတိုင်းဇာတ်ကွက်တိုင်းထိန်လန့်ကြောက်မတ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခန်းတွေနဲ့ပါ ... ညီမဖြစ်သူ ဆိုဂျောင်း ( Kim Sae-ron ) ဟာလူသတ်သမားရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုရုတ်တရက်ခံလိုက်ရပါတယ် ... အဲ့တော့အမဖြစ်သူကဝင်ကယ်ရတာပေါ့နော် ... အဲ့လိုနဲ့ပဲ သူတို့ညီအမနှစ်ယောက်manholeဆိုတဲ့အပေါက်ကြီးထဲကလူသက်သမားရဲ့လက်ထဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်မလား ? အဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဆောင်းရီကရော ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ ? ပုံမှန်အချစ်ဇာတ်လမ်းရိုးရိုးအေးအေး ကြီးတွေမဟုတ်ပဲ horror ဆန်ဆန် လူသတ်ကား တစ်ကားဖြစ်တာကြောင့် horror ကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ...
IMDb Rating အနေနဲ့ကတော့ 5.1/10 ရ ရှိထားပါတယ် ... rating အရ နည်းတယ် ထင်ရပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းမကောင်းလို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့... horror ဇာတ်ကားမို့လို့ပါ ... ကဲ အားလုံး ရင်တဖိုဖိုနဲ့ ကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော် ...
Download on V.I.P ( 612MB )
Download on pcloud ( 612MB )
Labels: Korea Thriller